जिर्ण जेलभित्र मुस्कुराउँदै महरा ! « Postpati – News For All
पूर्वमाओबादी नेताहरु साम्राज्यबादको निशानामा
केबी गुरुङ पढ्न लाग्ने समय : ८ मिनेट
मौसम चिसो छ तर देशमा एमसीसीको सगर्मि बढिरहेको छ । पूर्वसभामुख महरा दिल्लीबजारको जिर्ण कारागारमा छन् । भुकुम्प गएको ४ वर्षहरु बिते । भूकम्पको झट्काले दिएको भवनका जिर्ण घाउहरु ताजै छन् । कैदीहरु बस्ने जिर्ण कारागारले देशको मुहार प्रस्ट्याई रहेको छ ।
मानौ यो देशको मुहार फेर्न अझै बाँकी छ ।
हो यो देश नै अझै जिर्ण छ । तसर्थ ज्युदै छ जिर्ण कारागार । थोत्रिएको भयभित घर भित्र त्रसित कैदीहरु कोच्चिएर बस्नु परेको छ ।
जिर्ण जेल भित्र पनि एमसिसिको सगर्मी भेटिन्छ । जजक मुद्दामा जिर्ण जेल भित्र छिराइएका महराको मुहारमा अचेल बिस्तारै मुस्कुराहट फुराई रहेको छ । यद्यपि रोशनी शाहीले जबर्जस्ति करणी (जजक) होइन भन्दै छिन ।
एमसिसिको सगर्मी बढिरहदा महराको मुहारमा मुस्कान निस्कनु संयोग होइन, यथार्थता हो । किनकि महराको यौन मामिला बनावटी मात्रै हो, एमसीसीको योजनामा बुनिएको महरा प्रकरण बास्तबिकता हो ।
यसअघि महरालाई कारागार भित्र भेट्न जानेहरु भन्ने गर्थे, महरा निकै निरास छन् । महराको सुगर प्रेसर पनि बढिरहेको छ । बिरामी छन्, चिन्ताले आक्रान्त छन् तर उता रेशम चौधरी भने टेबुल टेनिसमा मस्त छन्, उनलाई चिन्ताको बाल मतलब छैन ।
हो यसपाली पनि चौधरी टेबुल टेनिसमै व्यस्त थिए । उनलाई चिन्ताको बाल मतलब थिएन । महरा भने त्यो बिगतको निराश धरातलबाट उठेर मुस्कुराई रहेको पाइयो ।
उनको राजनीतिक जिबन लिला समाप्त भयो भन्नेहरुका आंकलन मिथ्या हुन थाले । महरा माथि जे भयो त्यो षड्यन्त्रपूर्ण बैदेशिक हस्तक्षेप हो भन्ने बिषय जेल बाहिर चर्चा हुन थालेपछि महराको मुहारमा देखिने अँध्यारो दाग मेटिदै गएको हो ।
मंगलबार दिउसो रोल्पाका स्थानीय जनप्रतिनिधि संगै कृष्ण महरालाई भेट्न कारागार पुग्दा खुम्चिएको सानो आगनमा तिन जना आगन्तुकसंग बसेर ठट्टागर्दै गफहरु केलाउदै गरेको भेटायौ ।
खैरो रंगका पलास्टिकको कुर्सीमा बसेर ठट्टेउलि गफमा महराको मुहारमा मुस्कान मस्किरहेको थियो । सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, एमसिसि बहसले देश तात्तिएपछि महराको मुहारमा निरासाको अँध्यारो घेरा हटेको हुनुपर्छ ।
खासगरी यतिबेला उनको मुहारमा निरासाको छाँया समेत भेटिदैन ।
हामी पुग्न साथ् आफ्नो निजि स्टाफलाई महराले बस्ने कुर्सिको अडर गरिहाल्नु भयो । त्यो उनको निजि स्टाफ को हुन् ? एकछिन पछि भनौला ।
महराले म बाहेक लगभग सबैलाई चिन्नु भयो । म उहाँको लागि नयाँ अनुहार थिए, सायद त्यहि भएर होला मेरो पहिचानको बारे अलि केहीबेर घोत्लिनु भयो ।
-मेरोघर रोल्पा जिनावाङ्ग हो ।
जिनाबाङ कहाँ नेर ?
-साबिकको ३ नम्बर ‘घोप्टेओढार’ हो ।
घोप्टेओढार त जनजातिहरु बस्छन ।
-हो साबिकका वडाहरु १, २ र ३ को केहिभागमा जनाजाति बस्छन
तपाइको बाबाको नाम के हो ?
-इन्द्रबिर गुरु हो ।
पुर्व सभामुखले मेरो बाबाको नाम सोध्दा कतै चिनजान रहेछ कि भन्ने उत्सुकता मनमा जाग्यो तर त्यसपछि पनि उनले मेरो पहिचान पहिल्याउन सकेनन क्यार… सोंचे भन्दा फरक भनाइ पाए ।
‘त्यो ठाउँमा गुरुङहरु पनि छन् र ?’
उहाँ प्रति उत्तरित हुँदै भने, छन्, त्यहाँ गुरुङहरु बस्न थालेको ३ पुस्ता मात्रै भयो ।
बास्ताबमा गुरुङहरु जिनाबाङ्गमा बस्छन भन्ने सुन्दा प्राय सबैलाई आश्चार्य लाग्ने बिषय हो । जुनबेला आफ्नो पुस्ता हराएको भान हुने गर्छ । खासगरी हाम्रो समुदाय आफ्नै समुहगत हिसाबले बस्ने र आफ्नै रितिथितिमा रम्ने भएर नै होला, गुरुङहरु बिछट्टिएर बसे जस्तो लाग्ने ।
मेरा निजि बिषय अहिलेलाई यहि थाँती राखौ ।
कुरोलाई अन्तै नमोडि पुर्वसभामुख तिरै जाउ । पुर्बार्धदेखि आफुसंग बसिरहेका भेटालुहरुलाई महरा सरले अन्य तिन जनाको परिचय गराए । पत्रकार गोपाल चन्द, वडाध्यक्ष भरत पुन, उहाँ रोल्पा माडीगाउपालिका अध्यक्ष नन्द बहादुर पुन।
महराले आफ्नो स्टाफलाई चियाको अडर गर्दै भने, ‘उहाँ मेरो स्टाफ हो तर कैदी नै हुनुहुन्छ’ भन्दै हाँस्नु भयो । माफ गर्नु होला महरा सरको स्टाफको परिचय सोध्नै भुलेछु, यो भन्दा बढी परिचय म संग छैन ।
पुर्वार्धमा पाल्नु भएका एकजना भेटालुको परिचय गराउदै महराले भने, उहाँ महामहीम राष्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारीको आफन्त पर्नुहुन्छ (साइनोले राष्ट्रपति सानी आमा पर्नुहुन्छ) ‘परसुराम अधिकारि’ ।
‘उहाँ नै हो मलाई जेल हाल्ने..।’ भन्दै हाँस्नु भयो । अनि हामी सबैले हाँसोमा हाँसो मिलायौ ।
‘होइन एमसिसि हो उहाँलाई जेल हाल्ने भन्दै अधिकारिले ठट्टा गरे ।
पुर्वसभामुख महराले बेला-बेलामा ठट्टा गर्दै भेटालुलाई हसाई रहे, तर उनको भद्र स्वाभाब भने उस्तै थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले सोधी हाले ‘हजुर कहिले छुट्नु हुन्छ ?’
महाराले अधिकारितिर औल्याउदै भने ‘उहाँलाई सोध्नुस’ । हामी सबै मज्जाले हाँस्यौ ।
अधिकारिले उत्तर दिए, ‘एमसिसि पास भए उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ नत्र हुनुहुन्न’ । महराले थपिहाले एमसीसी पास भयो भने त म यहि जेलमै बसिरहनु पर्ला नत्र रोल्पामा भूमिगत हुन जान्छु’ भन्दै ठट्टा गरे ।
जतिबेला दाङ देखि चौधरी थरका दुइ जना महिलापनि हाम्रो बसाइको उत्तरार्धमा थपि सकेका थिए । एकजना राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा सांसद गङ्गा चौधरी हुन । एक जनाको नाम भने ठ्याक्कै सम्झन सकिन । तिनै सांसद चौधरीले भनिन तपाईलाई दङ्गगालीले जिताउने, रोल्पा गएर बस्ने, यो के भन्नु भएको ? भन्दै ठट्टैले हकारे ।
महराले प्रसंग बदले । ‘घोंगी खोइ ?’ मलाइ घोंगी नल्याएरै आउनु भयो ? चौधरी दिदिले हास्दै भनिन ‘घोंगी खानुहुन्न’ कोरोना लाग्छ, नत्र ल्याइदिन्थे ।’
चौधरी दिदि अलि जंगिएर महरा सरलाई सान्तोना दिंदै थिइन, ‘एम सिसिले देश खाला जस्तो छ, पार्टी भित्र भिल रावल, देब गुरुङ दाईहरुले जोडदार बिरोध गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरुलाई साथ दिन तपाईको खाँचो खट्किएको छ सर ।’
महराले दाङका साथीहरु आफुलाई धेरै भेट्न आउने गरेको सुनाए । अर्की चौधरी दिदिले सभामुख ज्यु भनेर सम्बोधन गर्दा महराले भन्थे, ‘सभामुख हैन के म अहिले, मलाइ सभामुख नभन्नुस ।’
एमसीसी बिषयमा महराको मुखार बिन्दुबाटै बुझ्न मलाइ उत्सुक जाग्यो । हामी संगैका साथीहरुको आसय पनि त्यस्तै देखिएपछि, मैले महरालाई प्रश्न तेर्स्याए ‘एमसिसिले देश हल्लाई रहेको छ, यसबारे तपाईको धारणा के छ ?
महराले यो बिषयमा अहिले म केहि बोल्दैन, बरु बाहिर आएपछि भनौला भने । एमसीसीको च्याप्टर नै क्लोज भयो ।
महराले सुन्तला बाँडे, सुन्तला खाएर बिदाइ भई निस्कियौ । तर निस्कनु पहिले थम्थमाउदै ‘एमसीसी बारे बाहिर आएरपछि भन्छु है’ पुनः दोहोर्याएर सम्झाए ।
खासगरी कृष्ण बहादुर महाराप्रती मेरो कुनै सहानुभूति छैन । उसो त सत्तामा बस्ने मानिसहरु प्रति मेरो उति-सारो सहानुभूति हुने गर्दैन । तर एमसीसी बिषयले देशको राजनीतिमाथि नै हस्तक्षेप गर्न थाले पछि महरा प्रति सहानुभूति नजनाई सुखै भएन ।
महरा काण्ड एक अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक बिषय हो । बैदेशिक हस्तक्षेप हो । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमाथि साम्राज्यबादको गम्भीर आक्रमण पनि हो ।
महरा देशको सभामुख हुँदा एमसीसी इशु सदनमा छिर्न पाएन । बरु सडकमा एमसीसीको आन्तरिक हस्तक्षेप सुक्ष्म ढंगले अघि बढ्यो । जब जबर्जस्ति करणीको बनावटी डिजाइनद्वारा महराको कारागार चलान संगै सदनमा एमसिसिको इशु उठ्यो।
महरा प्रकरण एमसिसिको ग्राण्ड डिजाइनमा हो भन्ने एउटा गतिलो आधार यहि हो । महरा संसद भवनमा हुँदासम्म एमसिसि बिषय नउठ्नु तर उनि कारागार पुगेपछि उठ्नु, घट्नाको पेरिफेरीलाई हेर्दा पनि महरा काण्ड प्रस्ट हुन्छ ।
जाहेरीवाला रोसनी शाहीलाई दबाबमा पारेर बनावटी मुद्दा जाहेरी गरेको उनको पटक-पटकको अभिव्यक्तिले प्रस्ट्याएको छ । उनले आफ्नो पहिलो घटना राजनीतिक फोर्सको आधारमा घटना बाहिर आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तत्काल रोसनी शाहीले कुनै घटना नभएको अभिव्यक्ति दिनु, महराले आफूमाथि जबर्जस्ति करणी नगरेको स्पस्टिकरण दिनुले महरा काण्ड झनै रहस्यमय देखिन्छ ।
फेरी पनि महारामाथि जबर्जस्ति करणीको प्रहरीमा उजुरी दिइन । मुद्दा दर्ता गराएपछि पनि जाहेरीवाला शाहीले उजुरी झिक्न पटक पटक प्रहरी शाखामा पुगिन तर उनको उजुरी झिक्न प्रहरीले मानेन । यसका पछाडी एमसीसीद्वारा परिचालित शक्तिपीठहरुको ठुलो हात रहेको अनुमान सहजै हुन्छ ।
शाहीले महराको कुनै कमजोरी नभएको लिखित बयान समेत दिइन । उनका पटकपटकका फेरिरहने अभिव्यक्तिले कसैको दबाबमा व्यक्त भएको जस्तो आसय झल्किन्छ तर उल्टै उनलाई पागल भन्नेहरुको भिड लाग्यो ।
त्यसपछि पनि जाहेरीवालाको इक्छाबिना नै महारामाथि मुद्दा चल्यो । महरा कारागार पुगे ।
हेडमास्टरको जागिर छोडेर महरा परिवार नै प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्दमा होमियो । महरा परिवारले रोल्पामा भएको सम्पति सर्वस्व गुमाए । माओबादि पार्टी संसदीय सत्तामा आएपछि चार चिरा भयो, जुन बेलापनि महराले प्रचन्डलाई नै साथ् दिए ।
जब एमसीसीको प्रपन्चमा महरा कारागार जाँदै थिए, प्रचण्डले भने ‘महराले मलाइ सबै कुरा लुकाउनु भयो, सत्य बोलेको भए बचाउन सक्थे, जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए ।
सायद महरा निरासाले भयभित हुनुको कारण नै यहि हुनुपर्छ।
खासगरी जनयुद्द लडेका सहोदर साथीहरुले अहिले सम्म महरालाई जेलभित्र भेट्न पुगेका छैनन् । युद्दबेलाका समकालीन साथीहरु मध्ये डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मोहन बैध्य किरण बाहेक अरु कुनै नेताहरु महरालाई भेट्न कारागार पुगेका छैनन् ।
कार्यकर्ताहरुको भने महरालाई भेट्न घुइचो लाग्ने गर्छ ।
बरु कारागार चलान भएपछी आफुलाई छोडेर बिद्रोहको बाटो पछ्याएका नेत्रबिक्रम चन्द विप्लबले महरा काण्ड बैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार भएको टिप्पणी दिए।
यसरि समकालीन नेताहरुले महाराप्रती देखाएको अनुउत्तरदायी भूमिकालाई अर्को फरक दृष्टिकोणले प्रबाह भयो । कृष्ण महरालाई गृहजिल्ला रोल्पामा राजनीतिक स्पेस नदिएर दाङ पुर्याएको धारणाहरु प्रवाहित भए ।
रोल्पाकै अर्का प्रभावशाली नेता बर्षमान पुन र महरा बीच शान्तिकालमा आएपछि राजनीतिक भागबण्डामा अन्तरविरोध थियो, त्यसकारण पनि महरालाई कारागार पुर्याउने बर्षमानको हात हुनसक्छ भन्ने अड्कलबाजीहरु चिया पसलमा सुनिन्थे।
तर यी सब केवल मिथ्या अड्कल बाजिहरु हुन्, आखिर महरा काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसंग जोडिएको बिषय हो । बरु समकालीन सहोदर साथीहरुले एमसीसीको बिरोध गर्न नसक्नु बिडम्बना हो ।
प्रचण्डले महराला बिसुद्द यौनमामिलामा बुझ्नु गलत थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टी भित्र यौन मामिलामा उद्दार बन्दैन तर यदि यौन मामिलाका मुद्दालाई महत्व दिने हो भने नेकपाका नेता शेर धन राई माथि लागेको आरोप किन गुमनाम पारियो ? आफ्नै कार्यकर्ताले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै मिडियामा रुँदै आउदा पनि ति महिलामाथि पार्टीले किन न्याय दिन सकेन ?
आज भूमाफिया बिष्णु पौडेललाइ किन अख्तियारीबाट जोगाइयो ? बालुवाटारमा हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा बिष्णु पौडेललाई जोगाउनु के कानुन सम्बत छ ?
त्यसैले एमसिसिवालाहरुले जेगर्दा पनि कानुनि रुपमा छुट, तर एमसिसिबिरोधिहरु विभिन्न बहानामा कानुनी कट्घेरामा उभिने दिन आएको छ । यहि हो साम्राज्यबादको घुमाउरो रणनीति, जसले हामी बीच आपसमा जुधाएर आफ्नो रणनीति सफल पार्ने योजनामा लागेको छ ।
अन्तमा, प्रचण्डले साम्राज्यबाद संग घुंडा टेकेपछि म सुरक्षित हुन्छु भन्ने आफुलाई लागेको छ भने त्यो आफ्नै लागि सबै भन्दा ठुलो घातक हो । पुर्वमाओबादी नेताहरु यतिबेला साम्राज्यबादीहरुको निसानामा छन् । माओबादीहरुलाई चार चिरा पार्ने पनि साम्राज्यबादी नीति हो । फुटाउ र राजगर साम्राज्यबादी नीति भित्र पुर्वएमालेका नेताहरुको साँठगांठ छ, पूर्वमाओबादीहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा छन् र उनीहरु सफल हुँदै गएका छन् ।
त्यहि रणनीति अन्तर्गत महरालाई सिध्याइएको हो ।
त्यसैले महरा प्रकरणले पुर्बमाओबादीहरुको भबिस्य संकटमा छ । बिदेशीको इशारामा चल्न नचाहने नेताहरुलाई छानी छानी सिध्याउने डिजाइनको सिकार महरा भएका छन् । भोलि देव गुरुङ पर्ने छन्, पर्सि लेखनाथ न्यौपानेहरु पर्ने छन् । बिदेशी शक्तिका पुजारीहरु उनीहरुका गोटी बन्ने छन् र अन्ततः उनीहरु पनि आफै समाप्त हुनेछन ।